Fampiofanana miorina amin'ny fampivoarana Digital ny orinasanao | | NY
Fampiofanana miorina amin'ny fanovàna nomerika ny orinasanao
Mitadiava fomba fanao amin'ny raharaham-barotra rehetra amin'izao fotoana izao, ary ho hitanao ny famantarana ny fiovan'ny nomerika nomerika. Antsoy azy ity ny olana iray satria ny ankamaroan'ny fikambanana amin'izao fotoana izao dia mahafantatra fa ny fepetra ilaina amin'ny fidirana amin'ny metodika dizitaly amin'ny asa atao isan'andro sy maharitra.
Amin'ny maha-mpisava lalana ny teknolojia fanomanana ny toerana dia ilaintsika ny manamaivana ny fijalian'ireo fivoarana ireo sy ny fihetsika ho an'ny mpanjifantsika. Izany no antony itodihanay mandrakariva ny fomba fiasa hanomanana bebe kokoa sy mora kokoa handrapana. Fomba iray hafa ny fanomanana iray: Digital Learning. Tena zava-dehibe amin'ny antony tsy ahafahantsika manangona vombom-panafody ampy fotsiny mba hananana ny miresaka ny zava-misy eo amin'ny tsena ankehitriny. Fa manandrama kosa isika hanangana fifandraisana amin'ny zavamisy any amin'ireo faritra avo indrindra izay ahitanay lavaka eny an-tsena. Izany dia manome fahafahana ny fikambanana hanana safidy amin'ny fanomanana hevitra na aiza na aiza ny fandaharam-potoana hametrahana ny fankasitrahana ho an'ny vondrona manokana sy ny fisehoan-javatra.
Farany, ny Digital Learning dia ny momba ny fanolorana ny zavatra tsara indrindra hanampiana ireo orinasa handray ny mpiasa amin'ny lehibe ho mahatalanjona. Mila tari-dàlana hianarana isika fa tsy hividy mpikambana ary tsy hampiasa izany mihitsy. Mba hamporisihana ny fianarana dia ataonay mpanararaotra hatrany ary mifototra amin'ny fanakianana mba hampivoatra ny fahalalana fianarana.
Mba hanatanterahana ny tanjonay amin'ny fanatanterahana ny tanjona tsara indrindra, dia mampiasa fitaovana be dia be miasa miaraka amin'ny mpamorona fanabeazana isika eo amin'ny fanabeazana alohan'ny fanabeazana fa tsy mifanentana fotsiny amin'ny dingana.
Ohatra, raha toa ka misy ny feo misongadina dia mety hanampy anao haka hevitra tokana amin'ny fotoana iray, dia nianatra tamin'ny alalan'ny fikarohana sy ny mpanjifa isika fa ny mpividy dia mangataka tsy tapaka zavatra hafa mihoatra ny lohahevitra. Izany no antony nametrahantsika fotoana maro be teo amin'ny famoronana.
Ny fahatsapana fa ny olona akaiky ny fiainam-pianakaviana, ny tempera, ny fitaomam-panahy, na ny andraikitry ny asa atao isan'andro dia afaka mandray anjara amin'ny vola azony, mahita ny fahamboniana izy amin'ny famelana olona iray hizara ny fotoana ahafahany manimba ny angon-drakitra ankehitriny. "Ny fahafahana hianatra kely kely amin'ny fotoana iray sy hiditra amin'ny fianaranao amin'ny fiainanao (na ny fanadinana!), Fa ny fianarana dia lasa ampahany amin'ny zavatra iainanao sy ny fomba hafa manodidina. Fantatrao hoe nahoana ianao no mianatra ny zavatra ianaranao, ary ianao dia afaka mametraka ireo tapany vaovao miaraka amin'ny zavatra fantatrao marina.
Ny fanabeazana marina sy ny fanatsarana ny fahaiza-manantanteraka dia ny fanirian'ny mpitantana sy ny tsiambaratelo. Ny sisa tavela dia tsy hanampy ny mpanjifa na ny mpiara-miasa aminy. Isika izao dia mifampiraharaha amin'ny fanomanana dizitaly manokana amin'ny Microsoft sy Fampiharana fampiharana, na dia manana lohahevitra maro hafa koa aza isika ao amin'ny torolàlana izay faritra lehibe toy ny rahona sy ny cybersecurity.
Inona no atao hoe mivezivezy? - Famaritana ny Fikirakirana | tambajotra
Fampidirana amin'ny GDPR: Iza, inona, rahoviana, ary aiza ny GDPR
Fahazoana tombontsoa amin'ny fampiharana ny ITIL & Nahoana no ilaina ny ITIL?
Fahatakarana ny Microsoft Dynamics 365
Ny fangatahana ireo manam-pahaizana momba ny fiarovana Cyber ​​amin'ny 2018
DevOps - Ny hoavin'ny IT Industries
Zava-dehibe ve ny CCNA? Inona no tokony ho fantatsika momba ny CCNA?
Fanatanterahana ny faneken'ny AWS